प्रचण्डको फेरी एक्शन, मन्त्री पत्नीसहित ७ नेता साधारण सदस्य पनि नरहनेगरी पार्टीबाट निष्कासित ! (नामावलीसहित) - News20 Media
April 30, 2021 N20LeaveaComment on प्रचण्डको फेरी एक्शन, मन्त्री पत्नीसहित ७ नेता साधारण सदस्य पनि नरहनेगरी पार्टीबाट निष्कासित ! (नामावलीसहित)
रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ बाट तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट सांसदमा निर्वाचित प्रभु साह एमालेतिर लागेपछि पदमुक्त भएका छन् । मौलापुर नगरपालिका प्रमुख रिनाकुमारी उनकै पत्नी हुन् । उनी पनि माओवादीबाट निष्कासनमा परेकी छन् ।
टाउकोको मुल्य तोक्दा नडराएका प्रचण्ड, नेपाली राजनितिको बाघ हुन: रबि लामिछाने
नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणमुक्त हुने २ लाख ९२ हजार नाघे